Biden အရင်းအနှီးသည်အခွန်တိုးမြှင့်လာသည်။ သင်၏အခွန်အတွက်ဆိုလိုသည်
သမ္မတဘိုင်ဒန်၊ ကွန်ဂရက်၏ပူးတွဲအစည်းအဝေးတွင်သူဌေးများအပေါ်အခွန်တိုးမြှင့်မှုသည်သူ၏မိသားစုများအတွက်အမေရိကန်၏အစီအစဉ်အတွက်မည်ကဲ့သို့ပေးဆပ်မည်ကိုဆွေးနွေးထားသည်။ Bloomberg / Images
သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကဒေါ်လာ ၁.၈ ထရီလီယံ American Families Plan
ကိုချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက်အခွန်တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်ပေးချေရန်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည် ။ အထူးသဖြင့်၎င်းအစီအစဉ်သည်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာ ၁ သန်းနှင့်အထက်ဝင်ငွေရသူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မားသောအရင်းအနှီးအမြတ်များခွန်များတောင်းခံရန်ဖြစ်သည်။ ကာလရှည်အရင်းအနှီးအမြတ်တိုးမှုအပေါ်အများဆုံးအခွန်နှုန်းထား - စတော့ရှယ်ယာများရောင်းချခြင်း (သို့) အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမှအမြတ်အစွန်းသည် ၂၀% မှ ၃၉.၆% သို့ကျဆင်းသွားနိုင်သည်။
ပညာရေးနှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်မှုအတွက်အသုံးစရိတ်တိုးမြှင့်ဖို့ Biden ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကြီးတဲ့အစီအစဉ်ကိုရန်ပုံငွေအပြင်အိမ်ဖြူတော်ကအခွန်တိုးမြှင့်မှုကိုသူက dynamiq တစ်ခုဖြစ်သည်ဟုမှတ်ယူသည်။လက်ရှိအခွန်စနစ်၏မတရားမှုအရှိဆုံးမှာ "ချမ်းသာသူများအနေဖြင့်အမြတ်ငွေအပေါ်အမြတ်ငွေများပေးဆောင်ခြင်းနှင့်
အဆိုပြုချက်အရ၊ အမေရိကန်အိမ်ထောင်စုများ၏အချမ်းသာဆုံး ၀.၃% သည် ၀ င်ငွေအားလုံးနှင့်တူညီသောနှုန်းထားကိုပေးဆောင်လိမ့်မယ် အိမ်ဖြူတော်အချက်အလက်အချက်အလက်စာတမ်း
(PDF) အရ "ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပြန်လစာနှင့်လုပ်ခနှုန်းထားများကိုညီမျှစေရန်" ကိုကူညီလိမ့်မယ်။
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အခွန်ထမ်းများအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုဖော်ပြထားပါတယ်။ အလယ်အလတ်တန်းစားနှင့်ဝင်ငွေနည်းသောအမေရိကန်များအတွက် - နှင့်နိုင်ငံရေးအစီအစဉ်သည်မည်သည့်နေရာတွင်ရှိသည်။
Que အတိအကျ Biden မှအဆိုပြုထားပါသလား။
Biden အမေရိကန်၏အစီအစဉ်ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ မိသားစုများ
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကွန်ဂရက်သို့ပထမဆုံးအကြိမ်မိန့်ခွန်းတွင်အဆိုပြုထားသောဒေါ်လာ ၁.၈ ထရီလီယံဒေါ်လာမြှုပ်နှံထားသည့်တက္ကသိုလ်တွင်မူကြိုကျောင်း၊ အခမဲ့ရပ်ရွာလူထုကောလိပ်၊ ကလေးစောင့်ရှောက်မှုပိုမိုတတ်နိုင်ရန်အစီအစဉ်နှင့်မိသားစုနှင့်ကျန်းမာရေးခွင့်အတွက်ဖယ်ဒရယ်အစီအစဉ်။ အမေရိကန်အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ်ဟုခေါ်သည့် $ 2.25 ထရီလီယံအခြေခံအဆောက်အအုံအထုပ်
၏မတ်လအကုန်တွင်ကြေငြာချက်ထွက်ပေါ်လာသည်။ ဤလှုံ့ဆော်မှုအစီအစဉ်သည်အဝေးပြေးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းများမှသည် ကျေးလက်ဒေသအမေရိကရှိဘရော့ဘန်းကိုလှိမ့်ထုတ်ခြင်းအထိအရာအားလုံးကိုအကျုံးဝင်စေပြီးကော်ပိုရိတ်အခွန်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်ငွေကြေးထောက်ပံ့လိမ့်မည်။
အကယ်၍ သင်လမ်းကြောင်းမှန်ပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊ ဒီအစီအစဉ်နှစ်ခုစလုံးကနောက်ထပ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ $ 1.9 ထရီလီယံ အမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ် , မတ်လအစောပိုင်းတွင် Biden နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ဥပဒေလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ကူးစက်ရောဂါကြောင့်သေဆုံးသူ မိသားစုအသစ်များ၏အချို့သောရှုထောင့်များသည် coronavirus ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်တွင်သတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သောအခွန်လျှော့ချမှုများကိုတိုးချဲ့ရန်သို့မဟုတ်တိုးချဲ့ရန်စီစဉ်ထားသည်။ ဥပမာ ကလေးများနှင့်မှီခိုသူများအတွက်အခွန်ငွေများနှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး ။
အမေရိကန်မိသားစုများအစီအစဉ်အတွက်ငွေပေးချေရန်၊ရေရှည်အရင်းအနှီးမှအမြတ်ခွန် ၃၉.၆% - ၀ င်ငွေအမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ သန်းအထက်ရှိသူများအတွက် - ၃.၆% - အမေရိကန်အိမ်ထောင်စုများ၏ ၀.၃ ရာခိုင်နှုန်းကိုထိခိုက်လိမ့်မည်။ Biden သည်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုပေးမည့်အစားအလုပ်ကိုဆုချရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Affordable Care Act မှဖန်တီးထားသည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ၀ င်ငွေအပေါ်ရှိပြီးသား Medicare အမြတ်ငွေတိုးမြှင့်မှုနှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောအခါဖက်ဒရယ်အရင်းအနှီးအမြတ်သည် ၄၃.၄% အထိရှိလိမ့်မည်။
“ ဒါဟာတော်တော်လေးကြီးမားတဲ့နှုန်းထားအပြောင်းအလဲတစ်ခုပဲ။ Watson အဆိုအရ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင်အိမ်ထောင်စု ၅၀၀၀၀၀ ခန့်သည်ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်ရရှိခဲ့သည်။
သတိပြုသင့်သည်မှာရေတိုအရင်းအနှီးများခွဲခြားထားခြင်းကိုသတိပြုသင့်သည်တစ်နှစ်သို့မဟုတ်တစ်နှစ်ထက်နည်းသောပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရရှိသောအမြတ်ငွေများသည်လက်ရှိဥပဒေအရသာမန်ဝင်ငွေ - လုပ်ခကဲ့သို့ - အဆိုပြုထားသောတိုးခြင်းသည်နှစ်ရှည်အရင်းအနှီးများသို့မဟုတ်တစ်နှစ်ကျော်ပိုင်ဆိုင်ထားသည့်ပိုင်ဆိုင်မှုများအပေါ်သာသက်ဆိုင်သည်။
အခုဖွင့်ထား: ဒီအချက်ကိုကြည့်ပါ: ၃ မိနစ်အတွင်းသင်၏အခွန်မေးခွန်းများကိုဖြေပါ။ 3:26
အရင်းအနှီးအမြတ်ခွန်နှုန်းတိုးမြှင့်ခြင်းအခွန်တိုးမြှင့်ခြင်းအပြင်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်သူတို့၏သေသည်အထိစတော့ရှယ်ယာများသို့မဟုတ်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများကိုပိုင်ဆိုင်ခြင်းဖြင့်ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုအခွန်ကိုရှောင်ရှားရန်ခွင့်ပြုသည်။ ယခုအချိန်တွင်ထိုပိုင်ဆိုင်မှုများကို၎င်းတို့၏အမွေဆက်ခံသူများထံသို့လက်ရှိစျေးကွက်တန်ဖိုးဖြင့်လွှဲပြောင်းလိုက်သည်။ ထို့ကြောင့်စက္ကူပေါ်တွင်အခွန်ကောက်ခံရန်အမြတ်အစွန်းမရှိပါ။ Biden ၏အစီအစဉ်သည်ပထမဆုံးဝင်ငွေဒေါ်လာ ၁ သန်းကိုခွင့်ပြုလိမ့်မည်ကွယ်လွန်သူတစ် ဦး ချင်းစီအားအခွန်လွတ်ပေးရန်။ ပြီးတော့စုံတွဲတစ်တွဲဟာဝင်ငွေဒေါ်လာ ၂.၅ သန်းကိုသူတို့ရဲ့အမွေဆက်ခံသူတွေကိုအခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။
Biden ကအစီအစဉ်၏အခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု - ဘက်တော်သားကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုများတိုးမြှင့်ခြင်းအပါအဝင် - သည်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်းအစိုးရ၏ ၀ င်ငွေနောက်ထပ်ဒေါ်လာ ၁.၅ ထရီလီယံရရှိလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်အရင်းအနှီးအမြတ်ခွန်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အခြေခံလစ်ကွက်၏နက်ရှိုင်းမှုများကိုဖယ်ရှားခြင်းတို့ကိုနှစ် ဦး စလုံးအားလက်ခံကျင့်သုံးရန်ရည်ရွယ်သည်။ အချို့ကသတိပေးသည်မှာဒုတိယသည်မရှိဘဲ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာဘီလီယံခန့်ကုန်ကျမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သူဌေးများသည်အခွန်ပေးဆောင်ခြင်းမှရှောင်ရှားရန်အတွက်ကွက်လပ်ကိုမှန်မှန်သုံးနိုင်သည်။
ရည်ရွယ်ထားသည့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအခွန်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကြိုးပမ်းမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်“ ချမ်းသာတဲ့သူတွေကတခြားသူတွေလိုပဲစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအတိုင်းလိုက်နာရမယ်” ​​ဆိုတာကိုသေချာစေရန် Biden ကထိပ်တန်းအခွန်နှုန်းကို ၃၇% မှ ၃၉.၆% သို့မြှင့်တင်ရန်အဆိုပြုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် ၂၀၁၇ ခုနှစ်သမ္မတ Donald Trump အခွန်လျှော့ချခြင်းမပြုမီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏အချမ်းသာဆုံး ၁% နှုန်းကိုပြန်လည်ရောက်ရှိစေခဲ့သည်။ စစ်အမြင့်ဆုံးအပါအ ၀ င်အမေရိကန်သမိုင်းတွင်အမြင့်ဆုံးဝင်ငွေနှုန်းသည်အခြားအချိန်များတွင်များစွာပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည်ကိုသတိပြုသင့်သည်။ အခွန်ပေါ်လစီစင်တာ မှပြုစုသောဂရပ်တစ်ခုအရ ၁၉၄၄ နှင့် ၁၉၄၅ ခုနှစ်တွင် ၉၄% ရှိပြီး ၁၉၇၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတစ်လျှောက်လုံးတွင် ၇၀% နှင့် ၅၀% တွင်ရှိခဲ့သည်။
ဒီအစီအစဉ်ထဲမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့အမေရိကန်တွေကိုပစ်မှတ်ထားတဲ့အခြားအပြောင်းအလဲတွေလည်းပါ ၀ င်ပါတယ်။ ၎င်းမှာ "ရွှေ့ဆိုင်းထားသည့်အကျိုးစီးပွား" ကွက်လပ်ကိုဖယ်ရှားခြင်းအပါအ ၀ င်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုအတွက် hedge ရန်ပုံငွေမိတ်ဖက်တွေကိုအခွန်နှုန်းထားနိမ့်ကျစေခြင်း၊ နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကိုခိုင်ခံ့စေခြင်းနှင့်ဝင်ငွေမြင့်မားမှု၊ ကြီးမားသောကော်ပိုရေးရှင်းများနှင့်ကြီးမားသောဂုဏ်သတ္တိများအပေါ် IRS အသုံးပြုခြင်း။
အကယ်၍ သင်တစ်နှစ်လျှင်ဒေါ်လာတစ်သန်းမပြည့်လျှင်လုပ်လျှင်၎င်းအဆိုပြုထားသောပြောင်းလဲမှုများ၏တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုကိုသင်ခံစားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ အမှန်တကယ်တွင်ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀၀ ထက်နည်းသောဝင်ငွေရရှိသူများသည် Child Tax Credit , ခရက်ဒစ်ရရှိသော ၀ င်ငွေခွန် ကလေးအခွန်ခရက်ဒစ် ၊ ခရက်ဒစ်ရရှိခဲ့သည့် ၀ င်ငွေခတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းများမှအကျိုးရရှိနိုင်ပါတယ် > နှင့်
။ ပြီးတော့အမေရိကအများစုအတွက်အခွန်မပေးသောအကျိုးခံစားခွင့်များစွာရှိပါသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်သည်အသက် ၃ နှစ်နှင့် ၄ နှစ်အရွယ်ကလေးများအားလုံးအတွက်အခမဲ့မူကြိုကျောင်းတစ်ကျောင်းနှင့်ရပ်ရွာကောလိပ်နှစ်နှစ်အခမဲ့အတွက်ဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေနိမ့်နှင့်အလယ်အလတ်ရှိသောမိသားစုများသည် ၄ ​​င်းတို့၏ ၀ င်ငွေ၏ ၇% ရာခိုင်နှုန်းကိုကလေးစောင့်ရှောက်ရန်မလိုအပ်ကြောင်းသေချာစေခြင်း၊ ဖက်ဒရယ်မိသားစုနှင့်ဆေးခွင့်ခွင့်ပြုအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးပါအခြားသူတွေအကြား, paid ရန်။
ကလေးသူငယ်အခွန်ဆိုင်ရာအကြွေး - ဘယ်လောက်ရလဲ။
ဒီမိုကရက်တွေကအောက်လွှတ်တော်နဲ့အထက်လွှတ်တော်ကိုတင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်ရီပတ်ဘလီကန်ရဲ့ထောက်ခံမှုမပါဘဲအခွန်တိုးမြှင့်မှုတွေကိုခွင့်ပြုပေးနိုင်စွမ်းရှိပေမယ့်ပါတီအတွင်းမှာဒီဥပဒေကြမ်းကိုအတည်ပြုဖို့တညီတညွတ်တည်းထောက်ခံမှုလိုအပ်လိမ့်မယ်။ ထိုအစီအစဉ်နှင့်ပတ်သက်ပြီးသံသယအချို့ရှိနှင့်ပြီးသား - GOP မှမသာဒီမိုကရက်ကနေ။ အဓိကပြconcernနာတစ်ခုကတော့အရင်းအနှီးအမြတ်တိုးလာမှုနှုန်းမြင့်တက်လာခြင်းကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုသူတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်အားပေးလိမ့်မည်။ အနည်းဆုံးတော့နှစ်များတစ်လျှောက်မြှင့်တင်သူတွေကဒီနှုန်းကိုနိမ့်ကျအောင်ထိန်းထားလေ့ရှိတယ်။ ဆက်စပ်သောအငြင်းပွားမှုမှာနိမ့်သောနှုန်းထားသည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုအားပေးသည့်အနေနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားငွေဖောင်းပွမှုနှင့်အရှိန်အဟုန်မြှင့်တင်ရန်ကူညီသည်။
အထက်လွှတ်တော်အမတ် Bob Menendez ၏ဒီမိုကရက်ပါတီu အထက်လွှတ်တော်ဘဏ္Financeာရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်နယူးဂျာစီပြည်နယ်အနေဖြင့်အရင်းအနှီးများမြင့်တက်လာခြင်းသည် "တိုးတက်မှု၏စွမ်းရည်ကိုဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်စွမ်း" ကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်နိုင်မည်ကိုပူပန်မိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Wall Street ဂျာနယ်
အခွန်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ Watson သည်နောက်ဆုံးတွင်အရင်းအနှီးအမြတ်တိုးလာနိုင်သည်။ သို့သော် ၃၉.၆% အထိမတက်နိုင်သည်။
"နှုန်းထား ၂၈-၃၀% အထက်တွင်မြင့်တက်နေပါကအစိုးရသည်အခွန်ထမ်းများအနေဖြင့် ၀ င်ငွေကိုစတင်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ ဒီအစီအစဉ်ကိုကွန်ဂရက်ကဖြတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဆိုပြုထားတဲ့အခွန်တိုးမြှင့်မှုဘယ်လောက်အထိအကျိုးသက်ရောက်မလဲဆိုတာကိုတော့သင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမသိရသေးပါဘူး။ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအနေဖြင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုရောင်းချရန်စဉ်းစားရန်
အကောင်းဆုံးအခွန်ဆော့ဖ်ဝဲကိုလည်းကြည့်ပါ။ > အခွန် ၂၀၂၁ - လှုံ့ဆော်ပေးသောငွေများနှင့်အလုပ်လက်မဲ့များအပါအ ၀ င်အသစ်သောအရာတစ်ခု
အခမ်းအနားရက်စွဲ 2021: နောက်ဆုံးသင်တင်နိုင်တဲ့ရက်နှင့်တိုးချဲ့မှုကိုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ
၂၀၂၀ အတွက်အခွန်ပြန်အမ်းငွေဘယ်မှာလဲ။ ၎င်းကိုခြေရာခံရန်နည်းလမ်းနှစ်ခုနှင့်ရက်စွဲများရောက်လာနိုင်သည်။
IRS ကငါ့အခွန်ပြန်အမ်းငွေဘယ်အချိန်မှာပို့မှာလဲ။ သင့်ငွေကိုဘယ်လိုခြေရာခံနိုင်မလဲ
2021-06-21 05:09:50 | အခွန်
နှောင့်နှေးမှုများမှာငွေပြန်ဆပ်ရန်စီစဉ်ထားသောသူများအတွက်ငွေတောင်းခံရန်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များပေးရန်ခက်ခဲသည်။ Angela Lang / မေလ ၁၇ ရက်နောက်ဆုံးအပြီး ၁ လအကြာတွင် IRS သည် ၂၀၂၀ ၀ င်ငွေခွန်နှင့်ပြန်အမ်းငွေများသို့ ဆက်လက်၍ ဆက်လက်အလုပ်လုပ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်အခွန်အေဂျင်စီသည်အပတ်စဉ်လှုံ့ဆော်မှုစစ်ဆေးမှုမျ...
2021-06-21 00:51:15 | အခွန်
IRS သည် ၂၀၂၀ ပြန်အမ်းငွေကိုအလိုအလျောက်ပြုပြင်ပေးပြီးအလုပ်လက်မဲ့အခွန်ပြန်အမ်းငွေနှင့်စာများပို့သည်။ Angela Lang / လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်က IRS သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်ကောက်ယူခဲ့သောအလုပ်လက်မဲ့အခွန်အခများပေးသောအမေရိကန်များသို့ငွေပြန်အမ်းငွေ ၂. ၈ သန်းကိုပထမဆုံးအကြိမ်စေလွှတ်ခဲ့သည်။ ပြန်အမ်းငွေသည်...
ဖြည့်စွက်ရန်မလိုသောမိသားစု ၃ ခုသည်လာမည့်လတွင်ကလေးအခွန်ငွေပေးဆောင်ရန်အတွက်လုပ်နိုင်သည်
2021-06-20 22:27:24 | အခွန်
ပုံမှန်အားဖြင့် ၀ င်ငွေခွန်ကိုပြန်မပေးသောမိသားစုများပင်လျှင်ယခုနှစ်စောစောပိုင်းကကလေးအခွန်ပေးဆောင်ခွင့်ရရှိနိုင်သည်။ Sarah Tew / 2020 သို့မဟုတ် 2019 အတွက်အခွန်စည်းကြပ်မှုအတွက်ငွေအနည်းငယ်သာရရှိသောဝင်ငွေနည်းသောအမေရိကန်များသည်လေးပတ်မပြည့်မှီလစဉ်ကလေးအခွန်ခရက်ဒစ်ပေးငွေများကိုရထိုက်သည်။ IRS မှဖြန့်ချိသည့် ...
ဘယ်အချိန်မှာကျွန်ုပ်၏အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးအမြတ်အခွန်ပြန်အမ်းငွေရမလဲ? IRS ပိုက်ဆံအကြောင်းမင်းသိဖို့လိုတာပေါ့
2021-06-20 01:25:30 | အခွန်
IRS သည်အလုပ်လက်မဲ့အခွန်သက်သာခွင့်အတွက် ၂၀၂၀ အခွန်ပြန်အမ်းငွေကိုအလိုအလျောက်ညှိပေးပြီးပမာဏနှင့်အတူစာများထုတ်ပေးသည်။ Angela Lang / ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တွင်အလုပ်လက်မဲ့အာမခံကိုစုဆောင်းသောသန်းနှင့်ချီသောအမေရိကန်များသည်ယခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်အခွန်များတင်သွင်းပါကဖက်ဒရယ်ပြန်အမ်းငွေရမည်ဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မတ်လ...
ဟေးမိဘများ ir မှဤစာသည်ကလေးအခွန်အကြွေးပိုက်ဆံလာနေသည်ဟုဆိုလိုသည်
2021-06-19 13:01:14 | အခွန်
သင်၏စာကိုကြည့်ပါ။ IRS မှစာအိတ်တစ်ခုကကြိုတင်ပေးငွေများရောက်လာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။ Angela Lang / IRS မှစာတစ်စောင်သည်သတင်းကောင်းကိုခဲယဉ်းသည်မှန်သော်လည်းယခုတကြိမ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ Coworker သည်အခွန်အေဂျင်စီမှစာတိုက်မှစာအိတ်တစ်ခုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပြီး၎င်းသည်စာရင်းစစ်ဆေးမှုအသိပေးချက်ဖြစ်သည်ဟုယူဆခဲ့သည်။ သိ...
နေဆဲသင့်ရဲ့အခွန်ပြန်အမ်းငွေကိုစောင့်ဆိုင်း? IRS နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်သင်၏ငွေကိုခြေရာခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာလုပ်ရမည်
2021-06-19 05:45:37 | အခွန်
နှောင့်နှေးခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးချေရန်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်၎င်းတို့၏ငွေပြန်အမ်းငွေကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်သူများအတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ Angela Lang / ဖက်ဒရယ်အခွန်ကောက်ခံမှုပြီးဆုံးချိန် မှစ၍ တစ်လခန့်အကြာတွင် IRS သည် ၂၀၂၀ ၀ င်ငွေခွန်နှင့်ပြန်အမ်းငွေများအားဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ...
2021-06-17 10:55:19 | အခွန်
ပုံမှန်အားဖြင့် ၀ င်ငွေခွန်ကိုပြန်မပေးသောမိသားစုများပင်လျှင်ယခုနှစ်စောစောပိုင်းကကလေးအခွန်ပေးဆောင်ခွင့်ရရှိနိုင်သည်။ Sarah ယေဘူယျအားဖြင့်နှစ်စဉ် ၀ င်ငွေခွန်ကိုလျှောက်တင်ခြင်းမှကင်းလွတ်ပါသလား။ သို့ဆိုလျှင် IRS သည်တနင်္လာနေ့တွင်လခကလေးအခွန်ပေးဆောင်ခြင်းအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီသောမိသားစုများကိုမှတ်ပုံတင်ရာ...
ဟေးမိဘများ IRS ထံမှဤစာကိုသင်ရရှိပါကကလေး၏အခွန်ခရက်ဒစ်သည်၎င်း၏လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေနိုင်သည်
2021-06-17 02:15:41 | အခွန်
သင်၏စာကိုကြည့်ပါ။ IRS စာအိတ်တစ်ခုသည်ကြိုတင်ပေးငွေများလာမည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။ Angela Lang / အသက်ရှူခြင်း။ IRS မှစာတစ်စောင်သည်သတင်းဆိုးမဟုတ်ပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး သည်အခွန်ရုံးမှစာတိုက်ကိုလက်ခံရရှိပြီးစာအိတ်မှာစာရင်းစစ်ဖြစ်သည်။ ဤအရာသည်မဟုတ်ခဲ့ပါ၊ သင် IRS ထံမှစာတစ်စောင်ကိုသာသင်ရရှိပါက၎င်းသည်ကလေးအခွန်...
စိစစ်သူမဟုတ်သူများအတွက်ကလေးအခွန်ခရက်ဒစ်ပေါ်တယ် - အခွန်မကြေညာသောမိသားစုများသည်ယခုအခါအထောက်အကူပြုကိရိယာနှင့်မှတ်ပုံတင်နိုင်သည်
2021-06-16 09:00:06 | အခွန်
ပုံမှန်အားဖြင့် ၀ င်ငွေခွန်ပြန်ပို့ခြင်းမပြုလုပ်သောမိသားစုများပင်ယခုနှစ်စောစောပိုင်းကကလေးအခွန်ပေးဆောင်ခွင့်ကိုရနိုင်သည်။ Sarah အခွန် / အကယ်၍ သင်သည်ပုံမှန်အခွန်စည်းကြပ်ရန်မလိုအပ်ပါက IRS သည်တနင်္လာနေ့တွင်ဖိုင်တွဲဖက်မဟုတ်သူများအတွက်ကလေးအခွန်အကြွေးကြိုတင်ပေးငွေများအတွက်မှတ်ပုံတင်ရာတွင်ကူညီရန်ကိရိယာတစ်ခု...
အလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်များအတွက်အခွန်ပြန်အမ်းငွေ - သင်၏ပိုက်ဆံရောက်လာချိန်နှင့်မည်သို့စစ်ဆေးရမည်စသည်တို့
2021-06-16 08:40:24 | အခွန်
IRS သည်အလုပ်လက်မဲ့အခွန်သက်သာခွင့်အတွက် ၂၀၂၀ အခွန်ငွေကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိပြီးငွေပမာဏနှင့်အတူစာများထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ Angela Lang / ၂. ၈ သန်းဖက်ဒရယ်ပြန်အမ်းငွေ IRS မှကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားနေစဉ်အတွင်းအလုပ်လက်မဲ့အာမခံစုဆောင်းသူများကိုထုတ်ပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်၏အာမခံငွေ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ၂၀၂၀ တွင်ရရှိသေ...
ဟေးမိဘများ သင့်တွင် IRS ထံမှစာရှိပါကကလေး၏အခွန်ခရက်ဒစ်သည်၎င်း၏လမ်းပေါ်တွင်ရှိနေသည်
2021-06-16 02:00:05 | အခွန်
သင်၏စာကိုကြည့်ပါ။ IRS မှစာအိတ်တစ်ခုကကြိုတင်ပေးငွေများရောက်လာလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုနိုင်သည်။ Angela Lang / IRS မှစာတစ်စောင်လက်ခံရရှိခြင်းသည်စိုးရိမ်ထိတ်လန့်နိုင်သည်။ အလုပ်ဖော်ကစာအိတ်သည်စာရင်းစစ်ဆေးမှုသတိပေးချက်ဖြစ်ပြီးချက်ချင်းပင်စိုးရိမ်နေသည်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်သည်မကြာသေးမီကအခွန်စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့မှအသိပ...
Larry ကိုမေးပါ။ ကျွန်တော့်ဇနီးရဲ့ဇနီးခင်ပွန်းသည်ရဲ့သက်သာခွင့်ဟာကျွန်တော့်ရဲ့အငြိမ်းစားခံစားခွင့်ရဲ့ ၆၂ နှစ်မှာထက်ဝက်ဖြစ်မလား။
2021-06-16 00:22:50 | အခွန်
Linkedin ရှိ FacebookShare တွင်မျှဝေပါ။ Linkedin တွင် TwitterShare တွင်ဝေမျှပါ။ LarryEconomic Security Planning, Inc. ယနေ့ခေတ်တွင်ဇနီးမောင်နှံနှစ် ဦး စလုံးသည်အသက် (၆၂) နှစ်ပြည့်သောအခါအိမ်ထောင်ဖက်အကျိုးခံစားခွင့်ပမာဏနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများကိုဖြေဆိုထားသည်။ Larry Kotlikoff သည်ဘော်စတွန်တက္ကသိုလ်မှစီး...
အဆင့်မြင့်ကလေးအခွန်ခမကြာမီရောက်လာတော့မည်။ ir မှာအဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား။
2021-06-16 00:16:56 | အခွန်
တိုးချဲ့ထားသောကလေးအခွန်ခရက်ဒစ်အတွက် Linkedin အတွက်ကြိုတင်ပေးငွေများဇူလိုင် ၁၅ ရက်တွင်စတင်မည်။ အမေရိကန်ကယ်ဆယ်ရေးအစီအစဉ်မှကလေးသူငယ်အခွန်ခ (သို့မဟုတ် CTC) အားအသက် ၆ နှစ်မှ ၁၇ နှစ်အကြားရထိုက်ခွင့်ရှိသည့်ကလေးတစ် ဦး လျှင်ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ အထိတိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ထပ်ဆောင်းတစ်နှစ်အတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီမှုက...
ဖက်ဒရယ်အခွန်ပြန်အမ်းငွေနှောင့်နှေးမှု - သင်၏ IRS ပြန်အမ်းငွေကိုခြေရာခံရန်
2021-06-15 09:18:37 | အခွန်
နှောင့်နှေးခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးချေရန်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်၎င်းတို့၏ငွေပြန်အမ်းငွေကိုအသုံးပြုရန်စီစဉ်သူများအတွက်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်။ Angela Lang / IRS သည် 2020 သန်းခေါင်စာရင်းကောက်ယူမှုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ခြင်းမှသည်လိမ်လည်မှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သင်္ချာဆိုင်ရာအမှားများက...
2021-06-15 06:28:48 | အခွန်
IRS သည်အလုပ်လက်မဲ့အခွန်သက်သာခွင့်အတွက် ၂၀၂၀ အခွန်ငွေကိုအလိုအလျောက်ချိန်ညှိပြီးငွေပမာဏနှင့်အတူစာများထုတ်ပေးလိမ့်မည်။ Angela Lang / ၂၀၂၁ အမေရိကန်အာမခံငွေပေးချေမှုသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရရှိသောပထမအကြိမ်ဒေါ်လာ ၁၀, ၂၀၀ ကို (သို့မဟုတ်အတူတွဲလျှောက်ထားသောအိမ်ထောင်သည်စုံတွဲများအတွက်ဒေါ်လာ ၂၀, ၄၀၀) အခွန်မဟုတ်သောအ...